शेयर गर्नुहोस आज वि.सं. २०७६ साल मंसिर २५ गते बुधबार, सन् २०१९ डिसेम्बर ११ तारीखको राशीफल — Himali Sanchar
शेयर गर्नुहोस आज वि.सं. २०७६ साल मंसिर २५ गते बुधबार, सन् २०१९ डिसेम्बर ११ तारीखको राशीफल
सुखद् समाचारले उत्साह जगाउनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ। बोलीको माध्यमले धेरैलाई प्रभावित पार्न सकिनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा समेत मनग्गे फाइदा हुनेछ।
पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। सुन्दर पहिरनका साथ व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। आकस्मिक खर्चले अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ। समय दिन नसक्दा काम बिग्रन सक्छ। पछिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। पहिले आक्षेप लगाउनेहरूले समेत समर्थन गर्न थाल्नेछन्। विदेश ताक्नेहरूलाई यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। टाढिएका शुभचिन्तकहरू नजिकिन सक्छन्।
परिश्रमको फल प्राप्त हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा लगानी गर्ने मौका छ। आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् र दैनिक काममा पनि उल्लेख्य फाइदा हुनेछ। व्यापार तथा साझेदारीमा पनि फाइदा हुनेछ। आम्दानी बढ्नेछ भने परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन्। पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ।
विशेष अवसर प्राप्त हुनुका साथै नाम, दाम र इनाम हातलागी हुने समय छ। प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। पछिसम्मका लागि दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। नोकरी तथा व्यवसायमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। रुचिका विषयमा लगानी बढाउने समय छ।
मिहिनेतले जिम्मेवारी दिलाउनेछ। प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। विशेष जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। सानो प्रयत्नले धेरैको भलाइ गर्न सक्छ। भेटघाटले महत्त्वपूर्ण कामको जग बसाउने अवसर दिलाउनेछ। मिहिनेत गर्दा सम्मानित स्थान प्राप्त हुनेछ। समाजमा तारिफयोग्य काम गर्दै राम्रो उपलब्धि हातपार्न सकिनेछ।
बेसुरमा काम गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। समयमा गम्भीर नबन्दा दु:ख पाइनेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। कामको चाप बढ्नेछ भने वादविवादले मन खिन्न तुल्याउनेछ। गोपनीयता बाहिरिनाले समस्या पर्ला। बाध्यात्मक परिस्थितिले सताउन सक्छ। अरूका काममा अमूल्य समय खर्चनुपर्ला।
मानसम्मान प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ। अर्थअभावले सताउन सक्छ। लोकाचारका लागि पनि भोगविलासका वस्तु जुटाउनुपर्ला। परिवारजन तथा आफन्तबीच आत्मीयतामा कमी आउने समय छ। यात्राको प्रक्रियाले खर्च बढाउन सक्छ। वादविवादले घर-गृहस्थीमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। तापनि, प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ।
रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। भौतिक साधन जुट्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् र प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। संघर्ष गरेरै अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। व्यापार तथा अर्थलाभ हुने काममा फाइदा हुनेछ। प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ। मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौडसमेत जिताउन सक्छ।
सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। सहपाठीहरू पछि पर्नेछन् भने मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ। व्यापारमा फाइदा र पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ। सन्तान वा अनुयायीको साथले पनि हिम्मत जगाउनेछ। चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्।
अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। श्रम परे पनि तारिफयोग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सकिनेछ। तर धेरै समर्पणले पनि उपलब्धि गुम्न सक्छ, सजग रहनुहोला। बुद्धिको उपयोगले मात्र लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। साइनो गाँस्नेहरूले अप्ठ्यारो पार्न सक्छन्। बेलैमा सजग नबन्दा व्यवहारमा दुःख पाइनेछ।
कामको उच्च मूल्यांकन हुनेछ भने लगनशीलताले विशेष अवसर दिलाउनेछ। रोकिएका काम बन्नुका साथै नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। साहसी काम गरेर अरूको मन जित्न सकिनेछ। प्रतिपक्षीहरू समेत सहयोगी बन्नेछन्।
हेर्नुहोस आज असोज ७ गते बुधवारको राशिफल
हेर्नुहोस आज असोज ६ गते मंगलवारको राशिफल
वामदेव गौतमको पद बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर
हेर्नुहोस आज असोज ५ गते सोमवारको राशिफल
कैलालीका स्थानीय तहमा पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी
हेर्नुहोस आज असोज ४ गते आइतवारको राशिफल
नेकपाका नेता कँडेलले प्रतिपक्ष सरह सेवासुविधासहित दोब्बर सुविधा लिदै आएको सामाचार आएपछि बाध्यभएर सेवा सुविधा फिर्ता गरे !
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता यामलाल कंडेलले प्रदेश सरकारले उपलब्ध...
मुटुमा प्वाल परेको ६वर्षीय बालिकाकाे उपचार रंगेली नगरपालिकाले गर्ने
रबिन्द्र बराल -माेरङकाे रंगेली नगरपालिका १ स्थित जमुवा टाेलमा वसाेबास गर्दै आएका लाल किस्कु की...
नेपाल तामाङ घेदुङ सिन्धुपाल्चोकद्वारा मृतक परिवारलाई नगद सहयोग
दुर्गा श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोक – जुगल गाउपालिका वडा नं. ५ का साविक बराम्ची वडा नं. ४...
बालिका खड्काले मुख्यमन्त्री राईसंग लिखित माफी मागिन्
काठमाण्डौ – प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको बिषयमा दुरुत्साहन झुटो आरोप लगाएको स्वीकार...
प्रदेश सांसद निमा लामाको पहलमा हेलम्बु बोल्देका विस्थापित परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग
दुर्गा श्रेष्ठ/सिन्धुपाल्चोक – प्रदेशसभा सदस्य निमा लामाको पहलमा हेलम्बु बोल्देका विस्थापित परिवारलाई खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री...
बराम्ची भीरबाट लडेर एक गर्भवती महिलाको मृत्यु
छिन्चुका ट्राफिक प्रहरी सिहँले असुल्छन अटोरेक्साबाट मासिक रकम
निर्वाचित वडाध्यक्षद्धारा श्रीमतीमाथी घरेलुहिसा, सम्वन्ध विच्छेदको मुद्वा दर्ता
झापाका मनकुमार लिम्बूले गरे आफ्नै साथीको हत्या !
सल्यानको बन्गाड कुपिन्डेमा ६२ जनाले गरे नेकपा छोडी कांग्रेसमा प्रवेश
नेपाल भित्रिने लगभग २ हजार कन्टेनर चाइनाको नाकामा अलपत्र
जुनी र सुबासको धनकुटा बजार म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित)
सिन्धपाल्चोक जुगल ५ का युवाहरु पहिरो पीडितलाई राहत संकलन गर्दै
कर्णालीका ट्राफिक प्रहरी जवानलाई राम्रो ठाँउमा खटाएबापत मोटो रकम हाकिमलाई दिनुपर्ने बाध्यता